Ikhwalithi Ephakeme Ephakeme Yensimbi YaseCeramic Tubes China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Tube ye-Ceramic > Ikhwalithi Ephakeme Ephakeme Yensimbi YaseCeramic Tubes
Ukuthungela ukugqoka okwenziwe nge-metallic ye-Molybdenum-manganese (Mo-Mn) / Tungsten (W) okudweba okulandelwa yi-nickel / igolide, emva kwalokho, isikhombimsebenzisi esinikezwa sikwenza ukuthi i-ceramic ibe yensimbi noma i-ceramic ku-ceramic yokujoyina nge-brazing nge-solder.
Esikhathini esivamile, ungqimba lwesendlalelo se-metallization sisetshenziswa ngobuningi obujwayelekile obuyi-10 kuya ku-30 ​​μm ngemva kokuphulukiswa. Inqubo yokubamba insimbi ilawulwa ngokucophelela ukuze kutholakale ingxube elinganiselayo yezinhlayiya ze-Molybdenum ezizungezwe isisindo seglasi ukuze kuqinisekiswe amandla okubopha okuphezulu phakathi koqweqwe oluhlanganisiwe nesisekelo se-ceramic. Ukuze ukwandise ukuthambisa kwe-brazing processing, senza i-nickel plating ibe ngu-3 ~ 10um. Singanikeza ukukhethwa kwezinhlobo ze-metallization ngezansi:
1. Isisekelo somzimba weCeramic + Mo / Mn metallization ....................... 2. Isizinda somzimba we-Ceramic + Ag ishaya ......... .............. 3. Isizinda somzimba weCeramic
4. Isisekelo somzimba weCeramic + Mo / Mn metallization + Ukufakelwa kwe-Nickle ..................................... ........ 5. Isizinda somzimba esivela ku-eramic + W ukwakha i-metallization + I-Gold plating
Siyakwazi ukuhlinzeka nge-britamised steel bushing ngokucacile nge-grinding emihle, ukuchithwa kwe-CNC, izinqubo zokusika. Ukubekezelelana kungaba +/- 0.01 ngokulinganisa konke.
Ukuphawula: Ngaphandle kwezinto ezihlukahlukene zamashubhu e-ceramic ensimbi, siphinde senze indandatho ye-ceramic ensimbi, i-substrate yensimbi yensimbi, i-disc ceramic disc, isilinda esenziwe nge-metal ceramic.